Mashiinka Qalabka Qalabka Bacriminta ee Joogtada ah ee Joogtada ah & Isku-darka Bacriminta Qalabka Bixiyeyaasha Heerka Sare iyo Warshad | YiZheng
Waa maxay Disc / Pan Organic & Compound Bacriminta Granulator?
Tixdan disc granulating wuxuu ku qalabeysan yahay saddex af oo bixinaya, fududeeya wax soo saarka isdaba jooga ah, wuxuu si weyn u yareeyaa xoogga shaqaalaha wuxuuna hagaajiyaa tayada shaqada. Dib-u-yareha iyo mootadu waxay adeegsadaan darawalka suunka dabacsan si ay si habsami leh ugu bilaabaan, u yareeyaan xoogga saameynta iyo hagaajinta nolosha adeegga qalabka. Qaybta hoose ee saxanka waxaa lagu xoojiyay tiro badan oo ka mid ah taarikada birta dhalaalaysa, oo ah mid waarta oo aan waligeed isbeddelin. Waa qalab ku habboon bacriminta dabiiciga ah iyo bacriminta isku dhafan, taas oo loogu talagalay saldhig adag, culus oo xoog leh, sidaa darteed ma lahan qaanso xarig go'an iyo hawlgal siman.
Heerka digsiga granulating waxaa lagu hagaajin karaa 35 ° ilaa 50 °. Digsiga wuxuu ku wareegayaa xagal cayiman oo leh jiingad uu ku wado mootada isagoo hoos u dhigaya. Budada ayaa kor u kici doonta iyada oo ay weheliso digsiga wareega ee hoos yimaada khilaafka u dhexeeya budada iyo digsiga; dhinaca kale, budada ayaa ku dhici doonta culeyska. Isla mar ahaantaana, budada waxaa loo riixayaa geeska saxanka awgiis sababtoo ah awoodda bartamaha. Qalabka budada ayaa ku rogaya raad gaar ah hoosta seddexdan xoogood. Waxay si tartiib tartiib ah u noqotaa cabbirka loo baahan yahay, ka dibna ku qulqulaya geesaha digsiga. Waxay leedahay faa'iidooyinka heerka granulating sare, granule uniform, xoog sare, hawl fudud, dayactirka habboon, iwm
Sida loo farsameeyo bacriminta isku dhafan Adiga oo isticmaalaya Cajalado Nidaamiyaha & Xarunta Bacriminta ee Disc Organic
Waxyaabaha maaddada Raw: Urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium sulphate, ammonium phosphate (monoammonium phosphate, diammonium phosphate, iyo whiting qalafsan, ca), potassium chloride, potassium sulfate iyo walxo kale oo cayriin ah ayaa loo dhigmaa sida ay tahay baahida suuqa iyo carada ku xeeran natiijooyinka baaritaanka).
Waxyaabaha 2.Raw ee isku qasma: Isku darka maaddooyinka waa in la isku daraa si loo hagaajiyo waxtarka bacriminta isku-dhafan ee granules.
3.Granulation of material raw: Qalabka ceeriin ah ka dib markii si isku mid ah loo qaso waxaa loo diri doonaa granulator (granulator durbaanka wareega, ama granulator extrusion extrusion labadaba halkan ayaa lagu isticmaali karaa).
4.Granulation Grantion: Gali kala sooca qalajiyaha, qoyaanka qolofta ku jirana waa la qallajin doonaa, sidaa darteed awooda kala qaadistu way sii kordheysaa waana sahlan tahay in la keydiyo.
5.Granulation qaboojinta: ka dib markii la qalajiyo, heerkulka granulation-ka ayaa aad u sarreeya isla markaana kala-soociddu way fududahay in la badiyo. Inta qaboojinta kadib, way fududahay inaad xirxirato si aad u keydiso oo aad u rarto.
Qeybinta Qeybta: Qeybaha qaboojinta ee la qaboojiyey ayaa la qiimeyn doonaa: walxaha aan u qalmin ayaa la jajabin doonaa oo dib loo soo celin doonaa, iyo alaabooyinka u qalma ayaa la sifeyn doonaa.
Filim 7.Fineished: Wax soo saarka u qalma ayaa loo dahaadhay si loo kordhiyo dhalaalka iyo wareegga gunta.
8.Bakhshadda sheyga la dhammeeyay: Qaybaha ku duuban filimka ayaa lagu keydiyaa meesha hawo leh.
Astaamaha Mashiinka Qalabka / Qalabka digniinta Organic & Compound Bacriminta Granulator
1. Hufnaan sare. Mashiinka wareegga wareegga wuxuu qaadanayaa dhammaan qaab-dhismeedka qaanso-wareegsan, heerka kala-baxku wuxuu gaari karaa in ka badan 95%.
2.Gunta hoose ee saxanka granulation waxaa lagu xoojiyay dhowr taarikada birta shucaaca ah, kuwaas oo waara oo aan waligood isbeddelin.
3. Saxanka Granulator ee lagu dhajiyay birta dhalada ah ee xoogga sare leh, ka hortagga daxalka iyo adkeysiga.
4. Qalabka ceyriinka wuxuu leeyahay ku-daboolid ballaaran Waxaa loo isticmaali karaa kala soocida alaabta ceyriinka ah ee kala duwan, sida bacriminta isku dhafan, daawada, warshadaha kiimikada, quudinta, dhuxusha, metallurgy.
5. Hawlgal lagu kalsoonaan karo iyo qiimo jaban. Awoodda mishiinku way yar tahay, hawlgalkiisuna waa lagu kalsoon yahay; Ma jiro dheecaan qashin ah inta lagu jiro geedi-socodka oo dhan, hawlgalku waa deggan yahay, dayactirkuna waa ku habboon yahay.
Muuqaal Disc / Pan Organic & Compound Bacriminta Granulator Video Display
Xulka Qaabka xulashada Disc / Pan Organic & Compound Bacriminta Granulator
Dhererka geeska (mm)
Xawaaraha Wareegga (r / min)
Hore: Rotary Drum Xarunta Bacriminta Granulator
Xiga: Nooca Cusub ee Granulator Bacriminta Noolaha Dabiiciga ah & Xarunta